Olona rava trano tetsy Andrefan’ambohijanahary Mbola tsy manan-kisitrihana ny ankamaroany
Anisan’ireny Rtoa Ravaoarimahefa Julie Liliane, Renim-pianakaviana manan-janaka enina. Nanofa trano tao Andrefanambohijanahary izy ireo saingy voatery nalana tao noho ny fandravana trano izay nitranga tao amin’ity faritra iray ity, iray volana lasa izay. Voatery nody any amin-dRay aman-dReniny ity Renim-pianakaviana ity sy ireo vady aman-janany araka izany. Tena mahatsiaro mijaly anefa izy ireo noho ny hateren’ny trano. Toraka izany koa ny toerana hamonjen’izy dimy mianadahy zanany efa lehibe ny fianarany…Manao antso avo amin’ny Fitondram-panjakana araka izany ireo rava trano etsy Andrefanambohijanahary mba hijery akaiky ny mikasika azy ireo. Raha ny tena marina mantsy dia tokony hisy ny fijerena azy ireo fa tsy sanatria avela hampitombo isa ireo mpatory an-dalana sy mpangataka eto an-drenivohitra indray. Nanambara moa Rtoa Ravaoarimahefa fa tsy mbola nisy nahazo fanampiana ireo mpiara-monina taminy rava trano hatreto raha voalaza kosa fa karana no nividy sy naka ny tany. Efa voafefy tôle moa ity toerana ity ankehitriny, nialan’ireo trano hazo am-polony maro.